Ogaden News Agency (ONA) – Itoobiya oo Lagu Dhaleeceeyay Weerarkeeda Dhinaca Internet-ka.
Itoobiya oo Lagu Dhaleeceeyay Weerarkeeda Dhinaca Internet-ka.
Warbixin ay soosaartay hay’ada caalamiga ah ee Center Citizen Lab, ayaa lagu sheegay in xukuumada wayaanuhu ay dhaqaale badan kubixiso sirdoonka dhinaca Intenet-ka iyadoo sida lasheegay dabagal badan kuhaysa hay’adaha iyo shakhsiyaadka mucaaradka ku ah xukuumada wayaanaha.
Sida warbixinta lagu sheegay taliska wayaanaha oo aad khalkhal uga qaaday dhinaca Internet-ka ayaa malaayiin doller kubixiya sidii uu u ogaan lahaa waxyaabaha lagu qoro aaladaha Internet-ka, waxaana warbixinta lagu xusay in taliska wayaanuhu uu xidhay akoono badan oo ay lahaayeen shakhsiyaad kasoo horjeeda.
Hay’ada xuquuqul insaanka ee Human Rights Warch ayaa dhowr jeer xukuumada wayaanaha ku cambaaraysay weerarada dhinaca Interner-ka ah ee ay sida joogtada ah uqaadayso, waxayna hay’adu sheegtay in Itoobiya ay mashquul kutahay kharibaada Kumbiyuutarada hay’adaha iyo shakhsiyaadka mucaaradka ku ah.
Human Rights Warch ayaa sheegtay in wadanka Itoobiya oo dhaqaale daro iyo abaaro aad uba’an ay kajiraan hadana wax aan micno samaynaynin lagu bixiyo dhaqaale malaayiin ah oo ay shacabku u baahan yihiin.
Hay’adaha caalamiga ah ayaa taliska wayaanaha ka codsaday in uu joojiyo hantida badan ee uu u adeegsanayo sirdoonka dhinaca Internerka ah iyo wali ku xadgudubka xuquuqda hay’adaha iyo shakhsiyaadka kasoo horjeeda xukuumada wayaanaha.
Ma aha markii ugu horaysay ee xukuumada wayaanuhu ay qaado talaabadan noocan oo kale ah, waxayna si aad ah dagaalka Internet-ka u bilaabeen markii ay kacdoonado ka bilowdeen gudaha Itoobiya, xiligaas oo ay rabeen in ay sirdoon ahaan wax ku xaliyaan.
Hay’ada xaquuqul insaanka ee Human Rights Warch ayaa sheegtay in loobaahan yahay xeer caalami ah oo lagu xakameeyo weerarka dhinaca Internet-ka, waxayna hay’adu ku talisay in ganaax iyo iqaab lagu soo rogo cidii ku xadgudubta akoonada ay dadu gaarka uleeyihiin.